Ogaden News Agency (ONA) – Xaaladaha ka aloosan Jigjiga iyo Cabdi Iley oo ku eedeeyay qayb ka mid ah wasiiradiisa ONLF
Xaaladaha ka aloosan Jigjiga iyo Cabdi Iley oo ku eedeeyay qayb ka mid ah wasiiradiisa ONLF
Posted by ONA Admin	/ May 1, 2013
Waxaan horey idiiinla socodsiinay inaan heyno malafaad badan oo ku saabsan maamulka Jigjiga ee uu gumaysiga ku cadaadiyo dadweynaha Somalida Ogadenya. Malafyadaa waxay isugu jiraan qaar sir culus ah oon waqtigeeda daahrogi doono iyo qaar ay tahay inay la socdaan dadweynaha iyo caalamkaba.
Wararkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah xogo aan ka helay qaar ka tirsan maamulka Ina Iley iyo qaar isaga aad ugu dhow. Waxayna intuba muujinayaan in xaalada (waxay ugu yeedhaan) kililka uu aad u qasan yahay, taasoo sababaha ugu badan ay tahay bay yidhaahdeen xukuumadda cusub ee Itobiya oo ku kala qaybsan arimaha Ogadenya, siday noo sheegeen xubna ka mid ah maamulka la shaqeeya adeegaha gumeysiga, Cabdi iley. Wararka aan helayno waxay sheegayaan in R/wasaaraha cusub uu isku dayey dhowr jeer inuu badalo Cabdi Iley, laakin uu culeys adag kagag yimid xagga Saraakiisha ciidamada oo ku naaxay laaluushka Cabdi Iley, siday haladalka u dhigeen. Waxay yidhaahdeen baajadka Ogadenya waxaa loo isticmaalaa, qaar la siiyo saraakiisha Ciidanka si ay u difaacaan maamulka ina Iley iyo dacaayado been ah oo laga sii daayo TV-yada ku hadla af-soomaliga; “.. xataa Liyuu Booliska 6 bilood mushahaar lama siin.” ayay yidhaahdeen masuuliinta noo soo diray xogtan.
Cabdi ilay waxaa la safan taageerana uu ka helayaa Saraakiisha dagaalka Ogadenya ku taajiray. Toban bari muddo laga joogo ayaa isaga oo Adis Ababa ku sugan loo sheegay inuu xilka wareejinayo shaqo kalena la siinayo. Warwareeg iyo lugta geed ku marasho badan kadib wuxuu yidhi; Kililka cid aan kaga tago ma jiraan. Wuxuuna aad u dhaliilay kuwa la shaqeeya isaga, taasoo ay aad uga xumaadeen markii loo sheegay. Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha uu ku andacooday Cabdi iley; “Ciidamada Liyuu
Boolis ku waxay raacayaan ONLF haddaan meesha ka tago, aniga umbaana maamuli kara.”
Kuwa la socday waqtigaa waxay yidhaahdeen Sida oday jirjiroolaha ayuu intuu is rogay, ayuu la soo booday; “sooma ogidin raga aad dhooranaysaan eed isleedihiin ku badala inay hoost kala shaqeyaan nabadiidka oo aan 3sano ka sifeynayey dawladda, hadana baaqi kusii yihiin oo aan ogaaday uun bishan inay jiraan rag wasiiro ah oo xidhiidh laleh ONLF”.
Intaa ka dib ayaa waxaa loo sheegay in wofti loo soo diri doono xaqiiqo raadis ah. Markii uu ku soo laabtay Jigjiga ayuu shir degdeg ah isugu yeedhay korneylo iyo laba jeneraal iyo madaxa sirdoonka kililka oo dhamaan qoyskiisa ah, taas oo muujinaysa inayna jiirin cid kale oo uu aaminayo, kuwaas oo kala ahaa, Abdirahaman Laba gole, Abdi Aden iyo Sheikh Mukhtar. Wuxuuna u sheegay in kolkay inoo timaado dawladda federaalka aad cadeysaan in aydaan cid kale aamineyn shaqadana aad joojinaysaan haddii Cabdi Iley laga qaado meesha sababtoo ah madaxda kililka kale waxaanu uga shakisanahay nabadiidka. Wuxuu kaloo la hadlay qoladii sirdoonka guud ee Itoobiya oo xidhiidh ka dhaxayey wuxuuna ku yidhi Cabdinoor Cabdulahi wuxuu leeyahay waxaan ku laabanayaaNairobioo ma sii joogayo haddii la badalayo Cabdi iley oon wada sahqayn jirnay. Waxay yimadeen qaar ka mid ah sirdoonka Jigjiga wayna la tageen C/noor meel ay geeyeena lama yaqaano in muddo ah, laakiinse Cabdinoor wuxuu ku jiraa jilidda riwaayadiha Cabdi Iley.
Waxaa dhanqan u ahayaa cabdi iley inuu cidkasta oo uu ka baqayo in lagu beddelo si un u khaarijiyo. Wuxuu diyaarinayaa hadda Cabdi Iley qorshe lagu khaarajinayo nin kasta uu isleeyahay waa lagugu badalayaa. Wuxuu samenayaa qorshe ay iska kaashanayaan Tigreega, oo raga lagu baddali lahaa qaarna meesha laga qaadayo qaarna xadhig loo diyaarinayo iyaga oo lagu masabidan doono waxay la shaqeeyaan ONLF.
Waxaa kaloo ka mid ah xogta Wasiirka/Wasiirada aan ka helnay in ciidamada Liyuu Booliska oo isaga cabdi iley ah toos u hoos yimaada ahaana kuwa isaga ilaaliya uu ku socda burbur iyo is aamin darro. Waxaa la dilaa qof kasta oo laga shakiyo, sidaa darteed hadda ma aha xoog laysku halayn karo. Wuxuu Cabdi Iley bilaabay maalmahan inuu kala caydhiyo oo qaarkood yidhaahdo waxay u galeen ONLF markay suuqa ka maqleen waxaa labadalayaa Cabdi iley. Taasina waa qayb ka mid ah riwaayadda uu jilayo.
Xogaha aan ka helnay wasiiradaa/wasiirkaa waxaa ka mid ah dhalinayara badan oo ciidanka Liyu Booliska ah oo la toogtay, amarkaana uu bixiyay Cabdulaahi Itobiya.
FG: Markii Liyuu Booliskii iyaga u shaqaynayey sidaa loo galayo waxaad garan kartaa dhibka iyo gumaadka shacabka lagu hayo inay ka sii daran tahay. Waxaa kale xogta aan helay ka mid qaar badan oon helnay magacyadooda inay jawaasiis yihiin hasa ahaatee dadweynaha ku dhex jooga magacyo iyo manaasib kala duwan. Kuwaasoon daaha ka rogi dooni waqtiyada ku haboon.